ကြုံတောင့် ကြုံခဲဖြစ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြုံတောင့် ကြုံခဲဖြစ်ရပ်
Posted by myanmarcitizen on Jan 19, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
မနေ့ကရုံးကို အသွား သမိုင်းလမ်းဆုံကိုရောက်တော့ လိုင်းကား driver က အင်္ကျီ လည်ကတုံးအဖြူတွေဝတ်ထား တဲ့သူတွေရှေ့မှာရပ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့တွေးမိလိုက်တယ် ဘယ်က၀တ်စုံအသစ်နဲ့ အဖွဲ့လဲလို့(ဒီကောင်တွေတော့ ဖမ်းခံရပြီပေါ့)။ နောက်တော့ မှ စပါယ်ယာက အော်တယ် “ခရီးသည်များ အကြွေ လိုအပ်ရင် လဲနိုင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ဟိုက် အထူးအဆန်းပဲ … တစ်ခါမှမကြားဘူးခဲ့တဲ့စကား … ဒါနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားပြီး ထိုင်နေရာက မတ်တပ်လေး ထရပ် ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ လူ သုံးလေးယောက် ပိုက်ဆံ အကြွေလေး တွေကိုင်ထားတာမြင်လိုက်တယ်။ ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ အပေါက်ဝနားက ခရီးသည်အချို့ တစ်ယောက်က 1000 ဘိုး တစ်ယောက်က 3000 ဘိုးလဲကြတာတွေ့တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လဲ အိတ်ထဲက ထောင်တန် ၂ ရွက် ထုတ်ပြီး အပြင်ကိုကမ်းပေးလိုက်တော့ ဆရာသမားတစ်ယောက်က 100 တန် တွေပြန်ပေးတယ်ခင်ဗျ။ လဲချင်တာက ကျွန်တော်တော်တော်များများလဲခဲချင်တာပါ။(ကားစပါယ်ယာတွေနဲ့ အကြွေကိစ္စပြသနာတက်လွန်းလို့) ဒါပေမဲ့ ခုမှ ဒါမျိုးကြုံဘူးတာဆိုတော့ မယုံရဲသေးဘူးလေ။ :-)
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခုလိုလုပ်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ (အခုအကြွေကိစ္စတင်မဟုတ်ဘူး ) ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်သေးတယ်။ ပြည်သူတွေ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဆင်မပြေ မှုတွေကို အစဉ်ပြေချောမွေ့အောင် လုပ်ပေးစေချင်တယ်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကလဲ ပေးထားတဲ့ကားတွေကိုပဲ စီးပြီးသွားမနေကြပါနဲ့။ လိုင်းကားစီးပြီး တစ်ခါတစ်လေ ဒိုးကြပါ။ ဒါမှ တကယ့်ပြည်သူ့အသံကိုကြားကြမှာပေါ့။ နောက်ပြီး ပြည်သူ့ အသံစစ်စစ်ကို ကြားနိုင်မယ့်နေရာတွေ ကို လှည့်ပြီး ဒိုးနိုင်ကြပါစေ
ဖြစ်ရပ်မှန်ပိုစ့်မှာ အကြွေလဲပေးမလို့ကြေငြာတုန်းသူကလဲပေးနေပြီ။ သူများစီးပွားပျက်အောင်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားရှားပါးပါးကြားရတာမို့ကြေနပ်စရာပါ။ ဒီမိုကရေစီအငွေ့အသက်တွေလား။ ကြိုးနီစနစ်ပျောက်လုပြီလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။
ဟိုက် ရှားလပါး …
ခရီးသည်တွေကို အကြွေ လဲပေးတယ် ဆိုပါလား …. ။
နောက်နေ့ကျရင်တော့ ထောင်တန် အထပ်လိုက် ဆောင်သွားဦးမှပဲ ….
လမ်းကြုံရင် လဲသွားရအောင် …
(နောက်နေ့ကျရင်တော့ ထောင်တန် အထပ်လိုက် ဆောင်သွားဦးမှပဲ ….
လမ်းကြုံရင် လဲသွားရအောင် )
တကယ် ကိုယ်လိုအပ်သလောက်မယူဘဲ လိုလို မလိုလို ရတုန်းယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့
အရင်ဦးသူက ယူသွားတော့ နောက်လူက မရတော့ဘူးလေ။
မန်းလေးမှာဒီအတိုင်းဘဲ ဓါတ်ဆီရောင်းစားတဲ့လူက ဇွတ်တိုးပြီး ယူတော့ တကယ်လိုအပ်သူလက်မရောက်တဲ့ပြဿနာစတာဘဲ။
ကိုယ်အသုံးချဘို့လောက်ဘဲယူမယ် ပြန်ရောင်းစားဘို့ ဖြစ်ဖြစ် မလိုအပ်ဘဲသိမ်းထားဘို့ဖြစ်ဖြစ်
မယူဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမွေးဘို့လိုအပ်ပြီလို ယုံကြည်ပါတယ်။
အဲဒီအဟ လေးရရင် မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့ သေခြာပြီဗျ။
တခုခု ကောင်းတာလေး၊အခွင့်အရေးလေးကို “လိုတာထက်”ပိုမယူတော့ဘူးဆိုရင်
ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာအဲဒါဘဲ။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကိုယ်ကလုပ်ရတာဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ပြ ပါတယ်။
အားလုံးကို သာတူညီမျှစိတ်မထားဘဲ အခွင့်အရေးသမားစိတ်ရှိနေသမျှ ကာလပါတ်လုံး
ဘယ်လို အစိုးရဘဲတက်တက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံမဖြစ်ဘူးဗျာ။
ကိုယ်ဖန်တီးသော ကိုယ့်နိုင်ငံလို့ ပြောရမှာပါ။
Ko pauk comment is fully correct.
myanmarcitizen တင်တဲ့စာထဲမလဲ ဘယ်သူတွေကလဲပေးတာလဲဆိုတာပြောမထားဘူး..
လိုင်းကားပေါ်မှလဲယူရခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ဘယ်ဌာနက ဖြစ်ကြောင်းမမေးကြည့်မိခဲ့ပါ။ နောက်တခါ ထပ်တွေ့မှသောချာမးကြည့် ပြီးပြန်ပြောပါ့မယ်။
နောက်ကျရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေလာဦးမယ်တဲ့…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာလုပ်တာကို တော့ ကောင်းတယ်လို့အမှန်အတိုင်းမြင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ် ။တရားသဖြင့် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မဲဆွယ် တာလည်းကိုယ်ကြိုက်ရင်ထောက်ခံသင့်ရင်ထောက်ခံရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သဘောပါ။ ဆိုးတာမြင်ရင်ဆိုးတယ်ပြောပါ။ ကောင်းတာမြင်ရင်အားပေးတတ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ကောင်းတာလုပ်သော်လည်း အဆိုးမြင်ဝါဒဖြင့် ပြစ်ချက်ရှာ ဝေဖန်နေရင်တော့ ခက်ပါတယ်။